တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည် တစ်နိုင်ငံလုံး အခမဲ့ တပ်ဆင်ပေးသည်။
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ၅ ဂါလန်ဘူးများကို ရေဖြည့်ပေးသောစက်
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAQGF 900
VAQGF 9003in 1 Automatic jar filling machine. So far, Viet An has been providing the purified water bottling companies with the best solutions for water purification, fast water filling, ensuring exceptional quality. Our machine is one of the specialized products for bottling and has been chosen byavariety of purified water bottling companies.
Viet An General Trading Joint Stock Company has 20 years of experience in importing and distributing the most modern and advanced industrial machinery in the world.
Viet An ကုမ္ပဏီမှ ရေသန့်ဘူး ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ရေသန့်ရှင်းမှု ရေမြန်မြန်လောင်းထည့်နိုင်မှုနဲ့ အခြားချွင်းချက်အရည်အချင်းတွေမရှိအောင် သေချာစေမှု စတာတွေကို ပေးနေပါတယ်။ ဒီစက်က အထူးစပါယ်ရှယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရေသန့်ဘူးကုမ္ပဏီများရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံးနဲ့ ခေတ်အမီဆုံးစက်တွေကို တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာမှာ နှစ် ၂၀ ကျော် အတွေ့အကြုံ ရှိပြီးသား ဖြစ်တယ်။
We arealeading enterprise in the import and distribution of industrial RO purified water filtration lines and automatic bottling and capping machines, manufacturing stainless steel ice machines for exporting under the brands of VA, USApec, Vinaro - the best quality brands in Vietnam.
ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက RO ရေသန့်စစ်ထုတ်သောလိုင်း၊အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်တွေနဲ့ ဗီယက်နမ်မှ နာမည်ကြီး brands တွေ ဖြစ်တဲ့ UA/ USApec/ Vinaro စတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ အစွန်းခံသံမဏိ ရေခဲစက် စတာတွေ တင်ပို့ရောင်းချဖြန့်ဖြူးတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။
Thanks to3automatic steps, this jar filling and capping machine shall help your companies remarkably save labor costs, increase the productivity of bottling process while still ensuring standards in food hygiene and safety.
အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်ကြောင့်
ဒီစက်ဟာ customer တွေရဲ့ အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်တယ်။ အစားအသောက်ရဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုစံနှုန်းမြင့်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်မှုကို မြင့်မားစေတယ်။
Details on VAQGF 9003in 1 automatic jar filling and capping machine
VAQGF 9003in 1 automatic jar filling and capping machine is the filling and capping machine with the capacity of 900 jars/hour. The machines are either manufactured by Viet An or directly, imported from America, Italy, Taiwan, China or per customers’ requests. The manufacturing process complies with ISO 9001:2015 standard - the most stringent standard today.
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 900 စက်က ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၉၀၀ ကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်တွေကို Viet An ကုမ္ပဏီမှလည်း ထုတ်လုပ်သလို customers တွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ အမေရိကန်၊အီတလီ၊ထိုင်ဝမ်၊တရုတ် စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှလည်း တင်သွင်းပါတယ်။ဒီစက်တွေကို ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Currently, there are numerous units offering various types of filling machines. Thus, to make wise choices, the customers should pay special attention to the machine price, warranty as well as maintenance policies . Working with Viet An, customers would be satisfied all above requirements. To us, customer isavital element of our business operations so we always put the TRUST and RESPONSIBILITY first.
လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စက်မျိုးစုံကိုပေးတဲ့ ယူနစ်မြောက်မြားစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် customer တွေက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ဖို့ ဈေးနှုန်း၊အာမခံချက်နဲ့ကြာရှည်တည်တံ့မှု စတာတွေကို သတိပြုရပါမယ်။ Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးအတွက် ကျေနပ်မှုရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် customer တွေက အလွန်အရေးကြီးတာမို့ ယုံကြည်မှုနဲ့ တာဝန်ယူမှုကို အမြဲတမ်း ဦးစားပေးပါတယ်။
VAQGF 900 3-in-1 automatic jar filling and capping machine is made of 304 stainless steel, with extremely high durability material and 20 years of shelf life. However, to achieve the highest productivity and long-term use, customers should also notice regular cleaning and maintenance to achieve the best efficiency.
VAQGF 900 စက်ဟာ 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် အနှစ် ၂၀ ကျော်အောင် ကြာရှည်အသုံးခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ customer တွေအနေနဲ့ ပိုပြီးကြာကြာအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
3 automatic steps integrated into one VAQGF900 machine
First step: Automatic jar cleaning
Wash inside and outside of the jars automatically
Make sure the jar is clean and sterile
Hygiene inside and outside of the jars is ensured thanks toaconveyor system,asystem of 304 stainless steel jar holders and pressure booster pumps integrated into the washing unit.
The 20L jars without caps are transferred to the jar holders of the machine. The chain conveyor operates through conveyor motor. The water will be sprayed inside and outside of the jars at the washing heads to clean the jars while they are being transfered. We use pure water with sterilized ozone for washing the jars , ensuring that the jars are completely clean and sterile after being cleaned.
VAQGF 900 စက်ရဲ့အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်
304 အစွန်းခံသံမဏိ ပုလင်းသယ်ယူပေးစက်နဲ့ ရေစုပ်စက်ကို သန့်ရှင်းရေးယူနစ်နဲ့ တွဲသုံးတဲ စနစ်ကြောင့် ပုလင်းအတွင်းအပြင်ကို သန့်ရှင်းစေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေတယ်။
အဖုံးမပါတဲ့ ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို ပုလင်းတွေထားတဲ့နေရာဆီ ပို့ပေးရပါမယ်။ အဲ့အချိန်မှာ သယ်ယူပေးတဲ့ ကိရိယာက အလုပ်လုပ်မယ်။ပုလင်းတွေကို ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ပုလင်းအတွင်းအပြင်သန့်ရှင်းဖို့ ရေနဲ့ပက်ဖြန်းပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့က ပုလင်းရဲ့သန့်ရှင်းမှုနဲ့ပိုးသတ်ထားမှုကို သေချာစေဖို့ ပုလင်းတွေကို သန့်ရှင်းတဲ့အခါ ရေသန့်နဲ့ ပိုးသတ်ပေးတဲ့ အိုဇုမ်းကို အသုံးပြုပါတယ်။
Second step: Automatic 20L jar filling with pure water
VAQGF900 model is equipped with6filling heads. These filling heads are made of high quality 304 stainless steel with high durability. There isasensor system integrated onto each filling head to ensure that the filling would be automatically stopped once water reachesacertain level.
Filling speed is up to 900 20L jars/h
The customers can adjust the filling speed with the button on the control system mounted onto the body.
There isaPLC touch screen integrated onto the control panel, showing the operating parameters of the machine so that the operator can easily observe.
အဆင့် ၂:ရေသန့်ဖြင့် အော်တိုဖြည့်ပေးခြင်း
VAQGF 900 စက်ကို ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၆ ခုနဲ့ ပြုလုပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒီခေါင်းတွေကို အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကြာရှည်အသုံးခံတဲ့ 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ စက်ခေါင်းတစ်ခုစီမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေပမာဏကိုရောက်သွားတာနဲ့ အလိုလိုရပ်သွားတဲ့ ဆင်ဆာစနစ်ပါဝင်ပါတယ်။
ဖြည့်တဲ့နှုန်းတဲ့ တစ်နာရီကို ၂၀ လီတာပုလင်းပေါင်း ၉၀၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။
Customer တွေက ထိန်းချုပ်စနစ်မှာရှိတဲ့ ခလုတ်နဲ့ လောင်းဖြည့်တဲ့ အရှိန်နှုန်းကို ထိန်းညှိနိုင်တယ်။
ထိန်းချုပ်တဲ့ ပန်နယ်မှာ လုပ်ငန်းလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ PLC touch screen ပါဝင်တယ်။
Third step: Automatic jar capping
The 20L jars, after being filled with water in step 2, will be transferred to the capping heads which are made of high quality 304 stainless steel, utilizing pressure for capping. There isacap duct system at the capping part to connect to the cap tray system in order for the workers to supply the cap, facilitating highly effective capping process.
The customers should invest automatic jar loaders to ensure stable and accurate capping, matching this machine’s capacity of 900 bottles/hour.
With this VAQGF900 3-in-1 automatic washing, filling and capping machine, the customers would be able to save 7-10 employees, increase efficiency and business competitiveness.
ရေဖြည့်ပြီးသား ပုလင်းတွေကို 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး အဖုံးတွေအတွက် လေဖိအားသုံးတဲ့ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးရပါမယ်။ ဒီစက်မှာ အလုပ်သမားတွေက အဖုံးတွေကို ယူပေးပြီး အဖုံးတပ်ခြင်းလွယ်ကူစွာ ပြီးမြောက်စေဖို့ အဖုံးတွေသယ်တဲ့ဗန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အဖုံးပြွန်စနစ် ရှိပါတယ်။
Customer တွေက တည်မြဲပြီး တိကျမှန်ကန်တဲ့ အဖုံးတပ်တဲ့စက်ကို ဝယ်ယူမှာဆိုရင် ဒီစက်ကို ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
VAQGF 900 စက်ရဲ့ သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်းတွေကြောင့် အလုပ်သမား ၅ ယောက်ကနေ ၇ ယောက်အထိ လျှော့ချနိုင်သလို ပစ္စည်းတွေများများထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ဈေးကွက်မှာအားပြိုင်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေမှာ ဖြစ်တယ်။
Some steps can be integrated into VAQGF9003in 1 jar filling machine
VAQGF900 automatic filling machine is one of the most powerful and modern filling machine in the market today. In addition to3automatic steps integrated, the machine can also be integrated with other automatic steps without affecting the productivity of the machine.
VAQGF 900 စက်မှာ ပေါင်းထည့်လို့ရတဲ့ အဆင့်အချို့
VAQGF 900 စက်ဟာ ဈေးကွက်မှာ အားအကောင်းဆုံးနဲ့ ခေတ်အမီဆုံးစက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1. BG-1200 automatic decapping machine
Function: Remove the cap from the jar
Capacity: 900-1200 caps/hour
Structure:2decapping heads
After purchasing, the jars should be decapped for reuse, Manual operation will take time and make the cap deformed, causing difficult reuse later.
With BG-1200 model,apressure of 0.8-1.0 Mpa generated shall make the caps easily decapped without being deformed. Reusing the caps shall help to remarkably save the cost. The machine is designed with modern technology, 304 stainless steel frame, making it easy to clean and bringing high durability.
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း: တစ်နာရီမှာ အဖုံး၉၀၀ ကနေ ၁၂၀၀ ထိ ချွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တည်ဆောက်ပုံ-အဖုံးချွတ်ပေးတဲ့ခေါင်း ၂ ခု
ပုလင်းတွေကို ပြန်အသုံးပြုဖို့ အဖုံးချွတ်ပေးသင့်ပါတယ်။လူတွေကိုယ်တိုင်အဖုံးချွတ်တဲ့အခါ အကြာလည်းကြာမြင့်သလို ပုံစံလည်းပျက်သွားပါတယ်။
BG-1200 စက်ဟာ 0.8-1.0 Mpa ဖိအားနဲ့ အဖုံးချွတ်ပေးပြီး ပုံစံလည်း မပျက်စေပါဘူး။အဖုံးတွေကို ပြန်သုံးတဲ့အခါ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်တယ်။ ဒီစက်ဟာ ခေတ်မီတဲ့နည်းပညာနဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လွယ်ကူပြီး ကြာရှည်အသုံးခံပါတယ်။
Technical specifications of BG-1200 automatic decapping machine
Capacity (cap/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 900-1200
Decapping heads (အဖုံးချွတ်သောခေါင်း) 2
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) Air
Pressure (Mpa) (လေဖိအား) 0.8-1.0
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 800x750x1800
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 120
Price (USD) (ဈေးနှုန်း)
2. ST-1200 automatic external jar washing machine
Thanks to high speed washing capacity with9washing heads, the jars would be washed quickly and automatically. After being decapped, the jars shall be transferred to an automatic external jar washing machine where the brush system capable of rotating 180 degrees would thoroughly wash them.
The most outstanding feature of this machine is the electricity-saving functionality. It only consumes 1.5kw regardless the capacity of 900 or 1,200. In compared to washing machines of common types in the market, this machine helps to save much more electricity
ဒီစက်မှာ သန့်ရှင်းပေးတဲ့ခေါင်း ၉ ခုပါတာကြောင့် ပုလင်းတွေကို မြန်မြန် အော်တိုသန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။အဖုံးချွတ်ပြီးသားပုလင်းတွေကို 180° brush နဲ့သန့်ရှင်းပေးတဲ့ စက်ထဲ ရွှေ့ရပါမယ်။ ဒီစက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက္ခဏာကတော့ လျှပ်စစ်မီးအား မစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖုံး ၉၀၀ ကနေ ၁၂၀၀ ထိ ချွတ်ရင်တောင် 1.5 kw သာ စားပါတယ်။ တခြားစက်တွေနဲ့စာရင် ဒီစက်က လျှပ်စစ်စားခြင်း တော်တော်သက်သာပါတယ်။
Technical specifications of ST-1200 automatic jar washing machine
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 900-1200
Cleaning head (သန့်ရှင်းရေးခေါင်း) 9
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) 1.5
Pressure (Mpa) (လေဖိအား) 0.7-0.8
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 2000x8000x1800
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 260
3. BL-900 automatic jar loading machine
Designed with6jar loading head, this machine bring higher capacity of loading in compared to previous ones. This machine will be pre-integrated into the VAQGF9003in 1 jar filling machine for an automatic manufacturing process.
The machine is made of absolutely genuine, qualified and durable material.
BL 900 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်
သယ်ယူပေးတဲ့စက်ခေါင်း ၉ ခုရှိပြီး အရင်ကစက်တွေထက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်ပါတယ်။ဒီစက်ကို VAQGF 900 စက်နဲ့ အရင်တွဲသုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဒီစက်ကို စစ်မှန်၍ အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Technical specifications of BL-900 automatic jar loading machine
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 900
Loading head (ပစ္စည်းသယ်သောခေါင်း) 6
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) 0.75
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 1950x960x1200
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 110
4. CL-1200 automatic jar cap loading machine
CL1200 automatic cap loading machine
Function: Automatically load, provide caps to the capping part
The machine is designed withacap tray with the container capacity ofathousand times larger thananormal one.
Operating procedure The operators put full caps into the tray of the cap loading machine. The conveyor motor will automatically transfer the cap to the duct connected to VAQGF9003in 1 jar filling machine. A built-in eye sensor at the conveyor will help to control the cap quantity. An air blowing system is also designed to blow the cap into the duct in proper direction.
With this cap loading machine, the caps 100% of the caps would not be reversed. Thanks to the eye sensor system, the conveyor will automatically supply more caps or stop supplying depending on the quantity left in the duct.
လုပျဆောငျခကျြ-အျောတိုအဖုံးတှကေိုသယျပွီး အဖုံးတပျတဲ့နရောကို ပို့ပေးပါတယျ။ဒီစကျကို သာမနျဘူးတှထေကျ အဆတဈထောငျလောကျကွီးတဲ့ အဖုံးထညျ့တဲ့ဘူးနဲ့ ဒီဇိုငျးဆငျထားပါတယျ။အျောပရတောတှကေ အဖုံးတှကေို အဖုံးထညျ့တဲ့ဗနျးထဲမှာ အပွညျ့ထညျ့ကွပါတယျ။သယျယူပေးတဲ့မျောတာက အဖုံးတှကေို VAQGF 900 နဲ့ ဆကျထားတဲ့ ပွှနျဆီကို အျောတိုသယျဆောငျပေးပါတယျ။သယျယူပေးတဲ့ ကိရိယာမှာ ပါတဲ့ eye sensor က အဖုံးအရအေတှကျကို ထိနျးခြုပျဖို့ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။လမှေုတျတဲ့စနဈကို အဖုံးတှကေို ပွှနျထဲသို့ မှုတျပေးနိုငျအောငျ ဒီဇိုငျးဆငျထားပါတယျ။
ဒီစကျကွောငျ့ ၁၀၀% သော အဖုံးတှကေို မဆုံးရှုံးရတော့ပါဘူး။ဒီဆငျဆာကွောငျ့ စကျက အဖုံးတှကေို ပွှနျထဲက အဖုံးအရအေတှကျကိုကွညျ့ပွီး သယျယူပေးနိုငျပါတယျ။
Technical specifications of CL-1200 automatic jar loading machine
Capacity (cap/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 300-1200
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) 0.18
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 600*600*3000
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 65
5. Anomaly inspection machine (DJ-100)
Anomaly inspection machine
With2lights integrated, the anomaly inspection machine will help the operators easily find the anomaly of the jars and reject unqualified jars.
Benefits: Facilitating jar quality assurance.
မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးတဲ့စက် DJ-100
ဒီစက်မှာ မီးသီးနှစ်လုံးပါတာကြောင့် ပုလင်းထဲမှာရှိတဲ့ မူမမှန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လွယ်ကူစွာ စစ်ဆေးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Specifications of DJ-100 anomaly inspection machine
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု)3x 20w
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 600x200x1000
6. SK-1200E Heat membrane shrinking machine
Once you have bought VAQGF 900 automatic jar filling machine with the capacity of 900 jars per hour, we highly recommend that you should invest an additional heat membrane shrinking machine - SK-1200E model.
After being covered with the polymer shrinking film by the operators, the jars will go through the heat shrinking chamber of the machine. The heat from the thermoelectricity effect will make the film tightly stick to the jar without being wrinkled.
SK-1200E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
VAQGF 900 စက်ကို ဝယ်ယူပီးတဲ့အခါ SK-1200E ကို ဝယ်ယူဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အော်ပရေတာတွေမှ ပေါ်လီမာ ရှုံ့ပေးတဲ့ဖလင်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ပီးတဲ့အခါ ပုလင်းတွေက အပူဖြင့်ရှုံ့ပေးသော အကန့်ဆီသို့ သွားကြပါတယ်။သာမိုလျှပ်စစ်မှအပူက ဖလင်ကို တွန့်သွားခြင်းမရှိဘဲ ပုလင်းမှာ ကပ်စေတယ်။
Technical specifications of SK-1200E Heat membrane shrinking machine
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) 36
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 4300x650x1100
7. CSG-10 plastic conveyor
Plastic conveyor for empty jars
The plastic conveyors would help you remove manual operation to transfer the empty jars through the places and save manufacturing space at the same time. The plastic conveyor is cheap, particularly suitable to various manufacturers. It has durability of over 15 years.
Notes: To ensure the shelf life, it is recommended that the conveyor is used to transfer the empty jars only .
ဒီစက်တွေက ပုလင်းလွတ်တွေကို တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ ရွှေ့တဲ့အခါ လူတွေကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်စရာ မလိုတဲ့အပြင် ထုပ်လုပ်ရတဲ့ နေရာအများကြီး မလိုစေဘူး။ဒီစက်က ဈေးတန်ပီးတော့ ထုပ်လုပ်သူအများစုနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ဒီစက်က ၁၅နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
မှတ်ချက်:ဒီစက်ကို ကြာကြာသုံးချင်တယ်ဆိုရင် ပုလင်းလွတ်တွေကို ရွှေ့ပြောင်းတဲ့ နေရာမှာသာ သုံးသင့်ပါတယ်။
Technical specifications of CSG-10 Stainless steel conveyor
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) 1.1
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 10000x290
8. CSSG-9 Stainless steel conveyor for jars containing water
Stainless steel conveyor for 20L jars
With remarkable durability and load-carrying capacity compared to other plastic ones, this conveyor would facilitating transfering the jars through the places without manual operation. Shelf life of the stainless steel conveyor is up to more than 20 years.
CSSG-9 ရေပါတဲ့ပုလင်းတွေအတွက် 304 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ
ဒီစက်တွေက ရေပုလင်းတွေ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ ရွှေ့တဲ့အခါ လူကလုပ်စရာမလိုအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ဒီစက်က နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာတဲ့အထိ ကြာရှည်ခံပါတယ်။
Technical specifications of CSSG-9 Stainless steel conveyor
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့မှု) 0.75
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 9000x290
The distinction of VAQGF 9003 in 1 automatic filling and capping machine
• The machine is manufactured using the most modern filling technology of the United States
• Quick filling process with3automatic steps
• There isasmart control panel that automatically switches off when an incident arises
• The installation process meets ISO:9001 standard.
• The closed automatic filling machine satisfies food hygiene and safety standards stipulated in National technical regulation No. 6-1-2010/BYT by the Ministry of Health
• VAQGF 9003 in 1 automatic filling and capping machine has compact design, matching industrial manufacturing requirements on space saving.
• The machine runs stably, maximizing energy consumption
• The machine is warranted for 1 year under long-term maintenance
• VAQGF 900 စက်ကို U.S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး လောင်းထည့်တဲ့နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်။
• လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အော်တိုအဆင့် ၃ ဆင့် ပါဝင်ပါတယ်။
• တစ်စုံတစ်ခုပြသနာပေါ်ပေါက်တဲ့အခါ ချက်ချင်းရပ်တဲ့ ထိန်းချုပ်ကိရိယာလည်း ပါဝင်တယ်။
• ISO 9001 စံနှုန်းလည်း မီပါတယ်။
• ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ အမျိုးသားနည်းပညာစည်းမျဉ်း No.6-1-2010/BYT အရ အစားအသောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှုကလည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
• VAQGF 900 စ်ဟာ နေရာအများကြီး မရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
• ဒီစက်က အင်နာဂျီသုံးစွဲမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။
• ဒီစက်က ကြာရှည်ခံတဲ့အပြင် တစ်နှစ် အာမခံ ဖြစ်ပါတယ်။
We offer special preferences to the customers buying VAQGF 9003in 1 automatic jar filling and capping machine of Viet An company
Contact us for the best products with unique preferences. With:
• The warranty period amounts to 12-24 months
• Permanent maintenance
• Professional and enthusiastic staffs
• Quick installation team
• အာမခံချက်က ၁၂ လ ကနေ ၂၄ လထိ ဖြစ်ပါတယ်။
• အစဉ်အမြဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
• ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ရှိတယ်။
• အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အင်ဂျီနီယာတွေလည်းရှိတယ်။
• လျင်မြန်စွာ တပ်ဆင်ပေးတဲ့ အဖွဲ့လည်းရှိတယ်။
• ဒါကြောင့် အလွန်ကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
VAQGF 9003in 1 Automatic jar filling and capping machine - your perfect choice
VAQGF 900 indicates 900 jars of 20 liters/hour The filling machine is manufactured using the most modern filling technology of the United States by Viet An factory, directly imported from America, Italy, Taiwan, China or per customers’ requests.
The main machine is used with the main functionality of automatic filling, quantifying and capping under high speed, satisfying food hygiene and safety standards for bottled water stipulated by the Ministry of Health
VAQGF 9003 in 1 automatic filling and capping machine has advanced and compact design, remarkably saving manufacturing space. In addition, some parts of the machine are made in stainless steel, making it more eye-catching, stable and durable.
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 900 စက်က ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၉၀၀ ကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်က Viet An ကုမ္ပဏီမှ U.S ရဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ customer တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ အမေရိကန်၊အီတလီ၊တရုတ်၊ထိုင်ဝမ်တို့က တင်သွင်းတဲ့ စက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ အရှိန်မြင့်မြင့်ဖြင့် အဖုံးတပ်ပေးခြင်းစတဲ့ function တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားသလို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ အစားအသောက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
VAQGF 900 စက်ဟာ အဆင့်မြင့်လာပြီး နေရာသိပ်မကုန်စေပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီစက်က 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပြင် ကြာရှည်ခံပါတယ်။
Installation area for VAQGF 9003in 1 automatic filling and capping machine
With its industrial compact design, the machine does not take much area to be installed. However, to meet stringent standards on food hygiene and safety as well as other requirements for the companies doing business on bottled water, It is recommended that you should prepareaproper area following below instruction if having intention to installaVAQGF 9003in 1 automatic filling and capping machine.
With nearly 20 years of establishment and growth, Viet An General Trading Joint Stock Company is currentlyaleading unit in Vietnam in distributing filling machine, water filtration lines, manufacturing stainless steel ice machines, etc.
Our filling products not only lead the domestic filling machine industry but also expand to international market, including: Laos, Cambodia, etc.
Contact us 24/7 to buy VAQGF 9003in 1 automatic filling and capping machine: +84 839 31 31 31
VAQGF 900 စက်ဟာ တပ်ဆင်ဖို့ နေရာအများကြီး မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစားအသောက်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ ပိုပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်တော့ နေရာကျယ်ကျယ်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။အနှစ် ၂၀ နီးပါး ဆောက်လုပ်ရေးတိုးတက်မှုအရ Viet An ကုမ္ပဏီသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ တစ်နာရီအတွင်း ၂၀ လီတာ ဘူး ၁၀၀ မှ ၁၂၀၀ အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေကို ထုတ်လုပ်တင်သွင်းတဲ့နေရာမှာ No.1 ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းတွေဟာ နိုင်ငံအတွင်းသာ ကျော်ကြားတာမဟုတ်ဘဲ လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား စတဲ့နိုင်ငံတွေအထိပါ ထိုးဖောက်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Technical specifications of VAQGF 900 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine
A. VAQGF900- 3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine -BUY ITEM
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 820-900
Extraction head (ထုတ်ယူသောခေါင်း) 6
Capacity (KW) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 20
Pressure (Mpa) (ဖိအား) 0.8-1.0
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 5200x2230x2110
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 2800
Characteristic (လက္ခဏာ) Heating water to 60°C
B. VAQGF900 -3-in-1 automatic 5Gallon washing filling capping machine, OPTIONAL STAGES
Model Price (USD) (ဈေးနှုန်း)
1. BG-1200 automatic decapping machine (BG-1200 အော်တိုအဖုံးချွတ်ပေးတဲ့စက်)
2. ST-1200 automatic external jar washing machine(ST-1200 ပုလင်းအပြင်သန့်ရှင်းပေးတဲ့စက်)
3. BL-900 automatic jar loading machine(BL 900 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်)
4. CL-1200 automatic jar cap loading machine (CL-1200 အော်တိုအဖုံးသယ်တဲ့စက်)
5. Anomaly inspection machine (DJ-100) (မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးတဲ့စက် DJ-100)
6. SK-1200E Heat membrane shrinking machine(SK-1200E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်)
7. CSG-10 plastic conveyor (ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ)
8. CSSG-9 Stainless steel conveyor (for jars containing water) (CSSG-9 ရေပါတဲ့ပုလင်းတွေအတွက် 304 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ)
Hỏi đáp & đánh giá3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 900
လီတာ၂၀ဘူးမြားကို အျောတိုဖွညျ့ပွီးပိတျပေးတဲ့ စကျ (၃မြိုးသုံး) VAQGF 100
ဘူးတွေ ပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက် VAQGF 1503IN 1
VAQGF 150-L3IN 1 ဘူးပုလင်းတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက်
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 300
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 450
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 1200